Taliyaha Ciidanka Qaranka oo Fasiray Sababtii keentay inuu 19 sannadood ka hor Guutadii 1aad u dejiyo Magaalada Oog & Duruufahii ku Xeernaa. |
Taliyaha Ciidanka Qaranka oo Fasiray Sababtii keentay inuu 19 sannadood ka hor Guutadii 1aad u dejiyo Magaalada Oog & Duruufahii ku Xeernaa.
“Sannadguuradii 1aad, ilaa maanta sannadguuradiisii 25aad, oo rubuc-qarni ah Ciidanka Qaranku waxuu heegan ugu jiray difaaca & Ilaalinta Qaranka JSL.”
Sannadguurada 25aad ee Ciidanka Qaranka ayaa laga xusay dhamaan Gobolada dalka.
Hargeysa- Taliyaha Ciidanka Qaranka JSL, Sarreeye-Gaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa shaaca ka qaaday in aasaaskii koowaad ilaa maanta Ciidanka Qaranku heegan ugu jiro sugitaanka nabadgelyada & difaaca Qaranka JSL.
Munaasibad loo qabtay xuska sannadguuradda 25aad ee Ciidanka Qaranka, oo Madaxweynaha JSL Md Muuse Biixi Cabdi, madaxda Goleyaasha Qaranka, Asxaabta Mucaaradka, Safiirada jooga dalka, martisharaf kala duwan ka soo qeybgaleen ayaa maanta lagu qabtay xarunta Taliska guud ee Hargeysa.
“Sannadguuradii 1aad, ilaa maanta sannadguuradiisii 25aad, oo rubuc-qarni ah Ciidanka Qaranku waxuu heegan ugu jira difaaca & Ilaalinta Qaranka JSL, sidoo kalena, ciidanku u dhaqaaqay sidii maamulka dawladnnimo loo gaadhsiin lahaa guud ahaan dalka, iyo sugitaanka nabadgelyada xuduudahiisa. Waanad ku mahadsan tihiin, waa kaa manta geedkii aad beerteen la hadhsanayo.” Ayuu yidhi.
Taliyaha Ciidanka Qaranka JSL S/G Nuux oo ka hadlayey qaabkii guutadii ugu horeysay ee Ciidanka Qaranka loo geeyey Gobolada Barriga JSL ayaa yidhi,
“Waxay ahayd sannadkii 2000, markii Guutadii u horaysay 17aad aanu ka rarnay Dararweyne, oo dejinay Oog. maalintii aanu tagnay dadkuna way nala yaabanaayeen, magaaladaa oo cariishyo yaryar ahayd. Labadii biloodba mar ayaan guutooyinka isku bedbedeli jiray. Ciidan wakhtigaa magaalada Burco ka shisheeyey ma jirin.
Taliye Nuux oo tafaasiil ka bixinayey qorshayaashii lagu tayeynayey Ciidanka Qaranka iyo muhiimada ka dambaysay furitaanka Dugsiyo tababar ayaa yidhi,
“Mudane Madaxweyne waxaan bilownay qorshayaashii lagu tayeynayey Ciidanka Qaranka, waxaanan abuurnay Dugsiyo tababar kala duwan. Ciidanka Qaranku waxuu leeyahay 6 Dugsi Tababar, mid Dugsiga C/lahi Askar (AHN) ee saraakiisha lagu tababaro,dhamaan Ciidamada kale aya nala wadaaga. Dugsiga Muj Harag-waafi (AHN) oo saraakiil-xigeenka lagu tababaro, si aqoontooda kor loogu qaado. 4 Dugsi oo Dhibooga lagu tababaro ayaa jira, Darar-weyne, Sheekh & Bixin, Ceerigaabo, waxaana sannadkan ka baxay laba dufcadood oo 6 bilood ah, oo Ciidanka Qaranka ku biiray waxa kaloo jira Dugsi cusub oo laga furay magaalada Samakaab, oo lagu tababari doono ciidamada Gobolada Sool, Cayn & Saraar. isla markaana waxa jira Saraakiil Ciidanka ka tirsan oo tababaro dibadeed ku maqan, kuwo kale way soo dhamaysteen sannadkan.” Ayuu yidhi. Isagoo raaciyey,
S/G Nuux Cismaan ayaa sheegay inay xeryaha Ciidanka Qaranka ee Hargeysa u heleen adeega korontada, waxaanu yidhi,